ယောက်ျားတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ဆို လူစဉ်မီသလဲ | ATK's Explicit Blog
အားတိုင်း အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ဖြေသင့်တဲ့ အဖြေကတော့…
ကိုင်း… ပေကြိုးတစ်ချောင်းရှာပြီးသာ တိုင်းကြပေရော့ ကိုယ့်ဆရာလေးတို့… 😀
ကိုင်း… ဘာပြောချင်ကြသေးသတုံး။ ကိုးရီးယားကားတွေ တအားစွံ၊ ကိုရီးယားမင်းသားတွေ ၀က်ဝက်ကွဲပေါက်နေပေမယ့် သူတို့ခမျာများရဲ့ ပျမ်းမျှ ငယ်ပါ အရွယ်အစားကတော့ ရွှေမြန်မာတွေထက် ၀.၈ လက္မ (တစ်လက္မ နီးပါးကြီးများတောင်) တိုရှာကြပေသကိုး။ 😀
from → Dicussion, For Men, Information
← ယောက်ျားတွေ အကြောက်ဆုံး ရောဂါနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ဂေါ်လီ ထည့်တယ်ဆိုတာ အောက်တန်းစားတွေ လုပ်တာ →
ဆရာခင်ဗျား……….male organ နဲ့ female organ များရဲ့ အာရုံအနိုးဆုံး(ခံစားမှုးအထိဆုံး)နေရာကိုသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား…..။
Light Dream(phyo) permalink
ဆရာပြောသလို ယောက်ကျားလေးများရဲ့ common sense မှာ ဒီလိုမျိုးတွေတွေးနေမိတာကြာင့်
အခုလိုဖြေကြားစာအတွက် လူငယ်များ(ကျနော်တို့) အဖို့မှတ်သားစရာပါခင်ဗျာ…
ဆရာ .. ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ရှာဖွေဖတ်နိုင်တယ်နော်…
ဆရာဝေမျှပေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို မှတ်ထားပါ့မယ် ..
ဆရာအပေါ်မှာသုံးထားတဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့မူပိုင်ခွင့်ကိစ္စကို ဘယ်လိုရှင်းပေးမလဲသိချင်ပါတယ်။ ပုံကရိုးရိုးပုံမဟုတ်ဘူးနော်။ ဆင်ဆာနဲ့ငြိစွန်းနေသလားလို့။
တော်တော်ကို ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဗဟုသုတ ပါ
ကျနော့်ငယ်ပါပုံစံက ဇတ်ကားတွေထဲကလို အပေါ်ကိုကော့နေတာမဟုတ်ပဲ အောက်ကိုကွေးနေတယ်ဆရာ . . . အတွင်းခံဘောင်းဘီပဲ အမြဲ ဝတ်လို့လားမသိဘူး။ ဘာပြဿနာရှိနိုင်လည်းဆရာ . . . ကျနော်ရေးတာ မယဉ်ကျေးရင် မဖေါ်ပြပါနဲ့ဆရာ . . .
တချို့လူတွေရဲ့ လက်မတွေက တအားကို ကော့ညွတ်နေတာများ လေးကိုင်းသဏ္ဍာန်၊ တချို့ကျတော့ ခပ်ကွးကွေး၊ တချို့ကျတော့ မတ်နေတာ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး။ လက်မလေးတွေခမျာတော့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ မ၀တ်ရှာကြဘူး။ အဲဒါ ဘာပြဿနာ ရှိနိုင်မယ် ထင်သလဲဗျာ။ အကြံပေးရရင်တော့ ဇာတ်ကားတွေက ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ 😦
ဆရာ website က အရမ်း တန် ဖိုးရှိပါ တယ်။
ဆရာ ရှင့် ပုံ မှန် ချစ်ခင်ကြ တဲ့ လင် မယားတွေဟာ တစ် ပတ်ကို ဘယ်နှစ်ကြိ မ် နေ ကြ ပါ သလဲ။ အတူ နေပြီး လျှင် အမျိုး သား မှာ အလွန် အမင်း ပင်ပန်း ပြီး ခေါင်းကိုက် နေ တတ် ပါ တယ်။ထို့ကြောင့် နေ ဖို့ အမြဲ ငြင်းပါ တယ်။ ကျမ်းမာရေး ချို့ တဲ့ တာ လား ၊ တစ် ခြား အိမ်ထောင်သည် တွေကော အဲလို ပဲလား။ ကျွန်မ ကို ဖြေ ပေးစေချင်ပါ တယ်။
ကျန်းမာ သန်စွမ်းပြီး စိတ်အေးလက်အေး ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေဆိုရင်တော့ ငယ်နုတဲ့အရွယ်မှာ တစ်ပတ်ကို ၄-၅-၆ ကြိမ်အထိ နေကြပါတယ်။ နည်းရင်တောင် သုံးကြိမ်လောက်လို့ ယေဘုယျ ပြောလို့ရပါ လိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင်သက် ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ အဲဒီ့အကြိမ်ရေက လျော့သွားတတ်ပေမယ့် တစ်ပတ်ကို တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်တော့ ရှိနေဆဲပါပဲ။ အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာသူများတောင် ကျန်းမာရေး ကောင်းနေသေးရင် တစ်ပတ် တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အထိ ခရီးဆက်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသားရဲ့ ပြဿနာကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်း ပင်ပန်းပြီး ခေါင်းကိုက်နေတတ်တယ်ဆိုတာကို သိပ်ဘ၀င်မကျမိပါဘူး။ ကိစ္စပြီးတဲ့အခါ မောတာတော့ မောတာပေါ့။ ပင်ပန်းတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်၊ နွမ်းသွားတဲ့အဆင့်အထိတော့ မရောက်ပါဘူး။ အများအားဖြင့် ကျန်းမာသူ အမျိုးသား (၉၀% ကျော်) ကိစ္စြ့ပီးသွားတဲ့အခါ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်မောကျသွားတတ်စမြဲပါ။ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ခံစားရတယ်လို့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။ အခုအနေအထားကတော့ သူ့ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးသင့်မယ် ထင်ပါတယ်။
ငါးလက်္မ လောက်ဆို မသေးဘူး ပေါ့နော်
ဆရာ ရှင့် ကျေးဇူး အများကြီးတင် ပါ တယ် ရှင်။ အခုလို ဖြေကြား ပေးတာ ကို ပါ။
တစ်ချို့ ကြာဆေးတွေ dose ပမာဏအရမ်းများများ သုံးမိရင် ခေါင်းကိုက်တတ်ပါတယ်။ ဦးခေါင်းမှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကို ကျယ်စေလို့ပါ။
ဆရာ ကျနော်မေးစရာတစ်ခုရှီပါတယ်။ ကျနော် ဇနီး နဲ့ ကျနော် သူစိတ်ကျေနပ်အောင်ဘယ်လို ဘဲနေနေ သူမှာ ဖို မဆက်ဆံဖို.စိတ်မရှီဘူး ဖြစ်နေတယ်။ သူက ကျနော် စိတ်ကျေနပ်ဖို.အတွက် သူကို ဆေးတစ်ခုခုဝယ်တိုက် ပါလို.ပြောတယ် ကျနော် ဘယ်ဆေးဝယ်တိုက်ရမလည်း နောက်ဘယ်မှာဝယ်လို.ရလည်း ဆိုတာလေး ကိုပြောပြပါအုံး နောက် ကျနော် မိန်းမရဲအင်္ဂါဟာ အရမ်း ကို ကျပ်လွန်းနေပါတယ် အဲ့ဒါကို ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလည်းဘာဆေးတွေတိုက်ရမလည်းဆိုတာကိုမေလ်းပို.ပေးပါခင်ဗျာ
ဆေးမလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ သည် ဘလော့(ဂ်)ကို သေချာဖတ်ပြီး “အပျိုး”ဆိုတဲ့ အပိုင်းကို အထူးတလည် အာရုံစိုက်ပြီး ကြိုးစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
ဆရာပြောခဲ့သလို ယောက်ကျားတစ်ယောက် က ငါးလက်မ မပြည့်တစ်ပြည့်ကနေ ခြောက်လက်မဝန်းကျင်ဆိုရင် လူစဉ်မှီတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးကိုအခြေခံပြီးပြောတာပါလဲဆရာ..
၃။ကျွန်တော်မြင်ဖူးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံက ပုံတွေအရတော့ ၅ လက်မ မပြည့်တစ်ပြည့်ကနေခြောက်လက်မဆိုတာ သူတို့ အဖို့ ရီစရာများဖြစ်နေမလားဆရာ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… အပေါ်က ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ ပို့(စ်)ကို အလွတ်ကျက်ပြီး ဆယ်ခေါက်တိတိ ပြန်ချရေးလိုက်ပါနော်။ အဲဒါဆို ဘယ်လိုမျိုးကို အခြေခံပြီး ပြောလဲဆိုတာ “ရေးတေးတေးလေးလောက်” သဘောပေါက်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။ 😦
ဆရာ ကျွှန်တောက်က 20ပြည့်ပါပြီ ခုထိငယ်ပါက ပျော့နေရင် ၁လက္မလောက်`ရှိပြီး။မာနေရင် ၃လက္မ ကျော်ရှိပါတယ်။အဲဒါပြဒနာရှိနိုင်လားသိချင်ပါတယ်။ရှိတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ။ဆရာဝန်လဲမပြရဲဘူးရှက်လို့ပါ။အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်မေးလ်ထဲစာချန်ခဲ့ပေးစေချင်ပါတယ်။
ကဲ ဘာမှ မလုပ်နေနဲ့ တိုနေရင်ဆက်လိုက် ရှည်နေရင် ဖြတ် ဒါပဲပေါ့…
Ye Thu permalink
ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့၆နှစ်ကျော်က ကြီးဆေးထိုးထားပါတယ်။အခုဖြစ်တာက ဆေးထိုးထားတဲ့အပိုင်း(အဖျား)ကပဲကြီးပြီးတော့ မူလတန်ဆာ(အတွင်းကအကြော)က ပိုသေးသွားသလိုခံစားနေရတယ်။ အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးပြုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်(ဆေးခန်းမှာသွားပြီးခွဲစိတ်ဖို့ပါ)။ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကိုသိချင်ပါတယ်။ အခုကဆီးသွားရင်လည်း ဆီးကအဖျားပိုင်းထဲမှာကျန်ကျန်နေပါတယ်။
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ကျွန်တော်လည်း အကြံမပေးတတ်ပါဘူး။ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသတာတော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ၀ိုင်းအဆဲ ခံရအောင် ရေးလိုက်ပါဦးမယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သည်မှာ မပြပါနဲ့။ ယိုးဒယားက ဆေးရုံတစ်ခုခုမှာဆိုရင် ပိုစိတ်ချမ်းသာရပါလိမ့်မယ်။ (သည်က ဆရာဝန်တွေ မတော်ဘူး၊ မကျွမ်းဘူးလို့ ပြောလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဟိုက ဆရာဝန်တွေက ကိုယ့်ကို လူလို ကြင်ကြင်နာနာ ဆက်ဆံတာတော့ ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှ သိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။ ပြင်ပဆေးခန်းချင်း တူရင် ကုန်ကျစရိတ်ချင်း မကွာလှတဲ့အပြင် တစ်ခါတရံ သက်သာတာကိုတောင် တွေ့ရပါတယ်။) ဒါလောက်ပဲ အကြံပြုတတ်ပါတယ်။
ဟေ့လူ- လေစုပ်ပိုက်နဲ့ တနေ့ ၂ ခါလောက်စုပ်ပေး။(၃၀မိနစ်)ဆီးလမ်းကြောင်းကျယ်သွားရင်သိပ်ပြဿနာမရှိနှိုင်ဘူး။
ဆရာ…….. ကာမ ဆက်ဆံမှု့နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတသ်ချက်လောက်မေးချင်လို့ပါ။
ယောင်္ကျားလေးတော်တေ်ာ များများက မိန်းကေလေးတေံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကြာဆေးသုံးကြပါတယ်..သုံပါများလာတော့ အကျင့်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပြီး မသုံးရင် မရတော့တဲ့အထိ second ပိုင်းလောက်မှာပဲ ပြီးပြီးသွားတက်ပါတယ်…အဲဒိအကျင့်ကို ဘယ်လိုပြင်လို့ရမယ်…ဘယ်ဆေးသုံးရမယ်ဆိုတာတစ်ချက်လောက် ပြောပြစေချင်ပါတယ်…လေးစားစွားဖြင့်
ဆေးတွေကို ကျွန်တော်ကဖြင့် အားမပေးလိုပါ။ သည်ကိစ္စက စိတ်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်က သိပ်ပြင်းနေချိန်မှာ မြန်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ကို အေးအေး ထားလိုက်ရင် အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကို အကျင့်ပါတယ်၊ ဆေးမသောက်ရင်တော့ မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ထဲက သူ့ဘာသာ ဖြစ်နေတာမျိုးကြောင့်သာ အခုလို မြန်ကုန်တယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
mg mg soe (U.S.A) permalink
ဆရာခင်ဗျား သေနေတဲ့အချိန်မှာဝ.၅လက်မဘဲရှိပြီးရှင်နေတဲ့အချိန်မှာ ၂.၅လက်မဘဲရှိတာမြင်ဘူးပါတယ်.အဲဒါဘာကြောင့်ပါလဲ၊
သဘာဝတရားရဲ့ ရက်စက်မှုပေါ့ဗျာ။ တချို့လူတွေ ငါးပေတောင် မပြည့်အောင် ပုနေတာ ဘာ့ကြောင့်လဲလို့ မေးရင် ဘယ်လို ဖြေမလဲ။
ဆရာဆိုဒ်ကစာတွေ ကောင်းလွန်းလို့အနည်းငယ်ကူးယူဖော်ပြပီး ဆရာဆိုဒ်ကိုကြော်ငြာပါရစေ
ခွင့်တောင်းပါတယ်ဆရာ… ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်….. မောင်(စွယ်စုံကျမ်း = http://www.zwmnna.com)
ကျွန်တော် အမြဲ ပြသနာတက်ရတယ် ကွန်တုံ အဖော်မဆံတော့ ဆရာသဘောပေါက်မှာပါ အမြဲ အခက်တွေ့နေတယ် အကျန်လေးပေးပါအုန်း
ကိုယ့်လူကပ်တွန်း ကပ်တွန်း ။
တကယ်ဘဲကောင်းပါတယ်ဗျာ လူငယ်တွေအနေနဲ့ အတုယူ မမှားသင်ပါဘူး အပြာစာအုပ်တွေဖတ် …စာဆိုတာက စဉ်းစားရေးကြတာပါ ဒါကိုအပြင်မှာ တကယ် လက်ခံလို့ မရပါဘူး မရှိဘူးလို့တော့ မပြောပါဘူး ဆရာပြောသလိုပေါ့ မြန်မာတယောက်အနေနဲ့ ပျမ်းမျှအနေအထား ရှိတယ်ဆိုရင် ရောင့်ရဲနိုင်ရမှာပေါ့ ဆရာ ခုလိုတင်ပြတာ တကယ်ကောင်းပါတယ် လူငယ်တွေကို ဗဟုသုတရစေတာပေါ့ စာပေဗဟုသုတ နဲတဲ့သူတွေကိုလဲ ပြန်ပြောနိုင်တာပေါ့ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ရှင်းလင်းချက်လေး တစ်ခုပါ
Love Kiss permalink
အခုမှ တွေ့တာ နောက်ကျသွားတယ်
Thanksalot ! this knowledge are necessary to make happy relations and happy life for everyone
YE LIN AUNG permalink
ဘာပဲပြေြာေ့ပာအားမငယ်ကြပါနဲတင်းလွန်းရင်လည်းပြတ်တက်တယ်၊ လျော့လွန်းရင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော် ဟဲ့ဟဲ့ဘာပဲပြေြာေ့ပာ တော်ရီ့ယောရီလေးပဲကောင်းပါတယ် သူ့အိုးနဲ့သူ့ဆန်ပေါ့ သူငယ်ချင်းတို့ရေ………အားလုံးအဆင်ပြေနိင်ကြပါစေ.။
ဆရာ့ကို..တစ်ခုမေးချင်ပါတယ်……ကျနော်ကြားဖူးတာလေးပါ..ဆရာ…ယောက်ျားတွေက..ရာမလို့ ခေါ်တဲ့..စိတ်ကြွဆေးပြား..သုံးထားတဲ့အချိန်မှာ…အင်္ဂါက..လုံးဝကို..မထောင်နိုင်ဘူးတဲ့….ပါးစပ်နဲ့ လုပ်ပေးရင်တောင်..မထနိုင်ဘူးဆိုတာ..ဟုတ်ပါသလား..ဆရာ…ဒါမှမဟုတ်..အဲဒါသုံးရင်…ပိုသလား..ဆရာ.
မပြောတတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါမှ မလုပ်ဖူးဘူး။
အကို ရာမဆိုတာက စိတ်ကိုကြွစေတဲအ၇ာပါ မထောင်တာနဲမဆိုင်ပါဘူးထောင်ပါတယ် သူက ကာမစိတ်ကိုအရမ်းနိုးကြွပါတယ် နောက်ပြီ ရန်လိုစိတ်ကိုလည် အရမ်းကြွပါတယ် ရှင်ရှင်ပြေား၇၇င်တော့ အကို ၇ာမမသုံတာအကောင်ဆုံးဘဲးဗျ ထောင်ချင်ရင်တာ့ အပြာ ဇာတ်ကာသာကြည်လိုက်ပါ ထောင်လာပါလိမ်မယ်
ka ka permalink
ဆရာ ကျွန်တော်လိင်တံဟာ သူများတွေလို မဟုတ်ပဲ အရေပြား ဖုံးနေပါတယ်ဆရာ ခွဲစိတ်ရမှာလားဆရာ အန္တရာယ် ရှိမရှိ သိချင်ပါတယ်။ ဖြေကြားပေးပါ။
သူများတွေနဲ့ နေရာတကာ လိုက်မတူချင်ပါနဲ့လေ။ ကိုယ့်စတိုင်နဲ့ကိုယ်နေသင့်ပါတယ်။ အရေပြားဖုံးနေလို့ တခြား ဘာမှ ဒုက္ခမပေးရင် အသာလေး နေလိုက်ပါဗျာ။
ဆရာ လက်မထပ်သေးဘဲ ကိုယ့်ကောင်မလေးနဲ့ အတူတူနေလိုက်တာက အခုခေတ် လူငယ်တွေကြားမှာ ရာခိုင်နုန်း ဘယ်လောက် ရှိနေပြီလည်းဗျ။ နောက် အဲလိုနေတာက လူငယ်တွေကြားက သာမန်ကိစ္စတစ်ခုလိုဘဲလားဆိုတာ သိချင်လို့ပါ မှားတာ ပါရင် sorry ပါဆရာ ကျတော့ကို email ပို့ ပေးပါဗျာ……
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အားအနည်းဆုံးက သုတေသနနဲ့ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုပါ။ ဒါ့ကြောင့် အဲဒီ့မေးခွန်းတွေအတွက် တိကျတဲ့ အဖြေမရှိသေးပါဘူး။ ၀ါသနာပါရင် ကိုယ်တိုင် အပင်ပန်းခံပြီး စစ်တမ်းသာ ကောက်ယူတော်မူပါခင်ဗျား။
ဟေး daddy ဆိုတဲ့လူ ကိုကြီးကျော်မြောက်ပေးတိုင်း တကယ်စစ်တမ်းသွားမကောက်နဲ့ ဒီကိစ္စက မဟေသီတွေက အမှန်အတိုင်းဝန်ခံမှ ကိန်းဂဏန်းအတိအကျရမှာ။ ကံမကောင်းရင် ပါရိုက်ခံရနိုင်တယ်။ ကိုကိုတွေကို သွားမေးလို့ကတော့ ကြွားလုံးတွေပဲရမှာ။
ဝက် က လေး ယောင် မင် permalink
အရမ်း မှန်ပါတယ် အားမငယ်နဲ့နော်
ဆရာခင်ဗျာ သဘာဝ နည်းလမ်းေ လးများေ ပးလို့ မရ ဘူးလား ခင်ဗျာ
ပြန်လည်နိုးထလာအောင်ဘယ်လို့ကြိုးစားကမလို့၇အောင် ၇ိုသေလေးစားစွာဖြင့် ဆရာတူမလေးကိုလွှတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ
ပထမဆုံး ကိုယ့်ကောင်မလေးနဲ့ဆက်ဆံဖို့ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရင် ကောင်းမလဲဆရာ ကောင်မလေးစိတ်မပျက်အောင်လို့ပေါ့ ဆရာရယ် သူလဲ ပထမပါပဲ
အဆင်ပြေရင် ကျွန်တော့်အမေးကို ဖြေပေးပါနော် ဆရာ
ကိုယ်တွေ့ဘုရားဆေးလေးပေးပါရစေ။ စင်္ကြံလျှောက် လှမ်းတယ်၊ ကြွတယ်၊ ချတယ် လူမမာလို ဖြေးဖြေးလေးလျှောက်။ နေးလေကောင်းလေ။ မာတယ်၊ ကြာတယ်(လမ်းလျှောက်ချိန် လက်နှစ်ဖက် နောက်ပစ်(သို့)ရှေ့ဝမ်းဘက်နားကပ်ထားပါ။ ကိုယ်တွေ့ပါ။
min ye paing permalink
aung thi ha permalink
မိန်းလေး အများစုဟာ နုညံ့တဲအထိအတွေ့လေးတွေ သာယာနှစ်သက်ကြတာ အများဆုံးလို့ ဆိုနိုင် တယ်
Chan Ko permalink
ဆရာခများ မုန်​ညှင်းဆီနဲ့လိမ်းဆုပ်​နှယ်​​ပေးရင်​ ကြီးတယ်​ဆိုတာဖြစ်​နိုင်​လားဆရာ ​ဘေးဥပါတ်​ကင်းပြီး သဘာဝကြီးချင်​တယ်​ဆိုရင်​မုန်​ညှင်းဆီ​နေ့ စဉ်​မှန်မှန်​လိမ်း​ပေးရင်​ငယ်​ပါကြီးထွားဖွံ့ ဖြိုးတယ်​ဆိုတာဖြစ်​နိုင်​လားဆရာ
ကျ​နော့ကို Mail မှာ Replay​လေးပို့ ​ပေးပညဆရာ